I-Azor Central Lodge - I-Airbnb
I-Azor Central Lodge
Ngemva kosuku olugcwele izenzakalo ezijabulisayo ezizungeze isiqhingi sase-São Miguel, phumula futhi ujabulele kuleli fulethi elihle futhi elibukekayo lapho ngisho nemininingwane emincane kunayo yonke ingalindelwe.
Ifulethi elikhulu elinekamelo lokulala elingu-1, indlu yokugezela eneshawa, ikhishi elinakho konke negumbi lokuphumula elinendawo yomlilo ye-bioetholic.
Nakuba indawo yokuhlala ingenalo ulwandle noma indawo yokubuka izintaba, amafasitela ayo amakhulu nama-balcony anikeza konke ukukhanya emklamo wayo kanokusho.
Indawo enhle! Indawo
ezungeze idolobha elikhulu i-Oceanus, lapho indawo yethu yokuhlala ikhona, ingamakhilomitha angu-1.4 ukusuka enkabeni yedolobha (Iminyango Yedolobha).
Ngaphansi kwe-Avenida Dom João III uzobe usendaweni engasemanzini ehamba ogwini lonke lwedolobha.
Ngezincwadi eceleni komnyango wesakhiwo, kunemakethe yehora eyandisiwe enhle kakhulu enemikhiqizo emisha nehlukahlukene kanye nesevisi yobuchwepheshe kakhulu. Ukubhaka amamitha angu-300 kude kuzoba yindawo engcono kakhulu yokudlela isidlo sakho sasekuseni. Indawo ezungeze idolobha elikhulu inezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela namasevisi.
Uma ufisa ukuvakashela isiqhingi sase-São Miguel ngokuqinisekile uzoqasha imoto. Ukupaka ngaphakathi kwesikhungo somlando kunzima futhi kuyabiza.
Uma uhlala e-Azor Central Lodge, ngeke nje ube nokufinyelela okulula esikhungweni sezomlando, kodwa futhi namathuba okupaka imoto esakhiweni sendawo yokuhlala.
Isikhathi esiningi sonyaka siphuma e-São Miguel ngakho cishe ngeke kwenzeke ukukubingelela ubuso nobuso. Noma kunjalo, njengoba sifaka inani elikhulu ekwamukeleni izivakashi, umngane wethu u-Souina Sousa uzotholakala ukukwamukela futhi akunike lonke usizo oludingayo phakathi nokuhlala kwakho. Ngaphambi kokufika kwakho sizohlala sikuthinta ukuze sikusize ulungiselele ukuhlala kwakho.
Isikhathi esiningi sonyaka siphuma e-São Miguel ngakho cishe ngeke kwenzeke ukukubingelela ubuso nobuso. Noma kunjalo, njengoba sifaka inani elikhulu ekwamukeleni izivakashi, umnga…
Inombolo yepholisi: RRAL 2639